Codsiyada miyuu dhab ahaantii lagama maarmaan u yahay in lagu hagaajiyo Android? | Androidsis
Adduunyada codsiyada loogu talagalay Android, waxaa jira qaar badan oo ka mid ah waxa loogu yeero aalado loo malaynayo inay u adeegaan tayadoodii Android kana dhig midda adduunka ugu adeegsiga nidaamka moobiilka ku shaqeeya mid wax ku ool ah. Laakiin maxaa run ka ah barnaamijyadan? Runtii ma yihiin kuwo wax ku ool ah oo lagama maarmaan u ah waxqabadka wanaagsan ee bartayada 'Android terminal'?
Marka xigta waxaan ku siinayaa aragtidayda shakhsi ahaaneed ee ku saabsan barnaamijyadan oo ka mid ah astaamahooda iyo waxqabadyadooda waxay noo ballan qaadayaan inaan hagaajino Android si aan uga helno waxqabad ka wanaagsan kan ka soo baxa boosteejooyinkeena marka loo eego naftiisa, ugu yaraan bartamaha dhexe iyo dhamaadka-dhamaadka, Waa laptops run ah oo leh tilmaamo farsamo oo inta badan ka sarreeya laptops.
Badanaa qaybtan codsiyada o aaladaha ballan qaadaya inay kor u qaadaan Android qalliin aad u dhakhso badan, dheecaan ah ama xitaa aad u ammaan badan, waxaan badiyaa helnaa laba koox oo waaweyn. Midka ugu horreeya wuxuu noqon karaa wicitaanada nadiifinta codsiyada o barnaamijyada nadaafadda, kuwaas oo inta badan ka kooban dhowr qalab sida Meel bilaash ah oo RAM ah, nadiifiye kayd ama faylalka mashiinnada raadinta miisaanka si aad u ogaato nooca faylasha ay ku jiraan xusuusta gudaha ee aaladaha Android.
Codsiyadaas oo loo yaqaan "Nadiifiyeyaasha", aniga shaqsiyan iyagu waa a khayaano cad iyo carqalad ku timid bartayada 'Android terminal'. Marka hore maxaa yeelay nidaamkayaga hawlgalka ee u gaarka ah Android, gudahiisa Dejinta / Codsiyada waxay horeyba u haysteen qalab yeelan doona, tusaale ahaan xasuusta khasnado nadiif ah sii deynta iyada oo aan loo baahnayn qalab dibadeed nooc kasta ha ahaadeene in waxa ay qabanayaan oo dhan ay ka buuxinayaan xusuusta gudaha ee Androids-keena barnaamijyo aan waxtar lahayn
Sida qayb ka mid ah xusuusta RAM ee ah in la nadiifiyo ama aan la nadiifinin, in la isticmaalo ama aan loo isticmaalin qalab dibadeed si loo sameeyo. Kaliya waxaan kuu sheegayaa weedh: «RAM waa in la adeegsadaa iyo Android waa mid ku filan wax ku ool ah, gaar ahaan noocyada 4.0 iyo wixii ka dambeeya, si otomaatig ah loogu maareeyo xusuusta RAM iyo xirmooyinka codsiyada ah ee aan joojiney isticmaalka markii aan maareyneyno nidaamkayaga hawlgalka waxay u baahan yihiin RAM badan iyo kheyraad badan oo nidaamka ah..
Cadayn fiican oo tan ah ayaa la heli karaa markaan haysanno dhowr codsi oo furan oo gadaal ka socda oo aan isku dayeyno inaanu socodsiino ciyaar ama codsi loo arko mid culus, wakhtigaas, Nidaamka hawlgalka ee Android wuxuu awood u leeyahay inuu xiro dhammaan codsiyada aan ku wadno asalka, in mudnaan la siiyo fulinta arjiga ama ciyaarta kor ku xusan. Weligeed ma nagu dhacday in markii aan ka baxeyno ciyaar ka mid ah ciyaarta aad ugu jeceshahay aan ogaanay in xusuusta RAM-ka ee gantaalkeenna gabi ahaanba ay gebi ahaanba bilaash tahay sida haddii aan isticmaalnay mid ka mid ah aaladaha nadiifinta xusuusta ee RAM?
Waxa kaliya ee aan ku helno kuwaan Furitaanka RAM ama qalabka nadiifinta ayaa baabi'inaya batteri badan, Tan iyo markii la tirtirayo codsiyada ku keydsan RAM, nidaamka qalliinka waa inuu dib ugu furaa gabi ahaanba kharashka dheeraadka ah ee kheyraadka iyo qulqulka badan ee batteriga bartayada 'Android'.
Ku saabsan nooca codsiyada loo magacaabay si aan la hubin antivirus loogu talagalay android, badankood inay bilaabaan waa khiyaano ama khiyaano in waxa kaliya ee ay ku qabtaan isticmaalaha ay tahay waxa loogu yeero saamaynta placebo, ama waxa isku mid ah, waxay na siinayaan amni aan sugnayn oo aan sugnayn oo xitaa qatarteeda leh.
Kadib waxaa jira barnaamijyo antivirus ah oo runtii ah codsiyo loogu talagalay in loogu talagalay in lagu ilaaliyo barnaamijkeena Android, inkasta oo aan horey kuugu sheegay inay yihiin kuwa ugu yar, laakiin Aad bay u cagaaran yihiin ama aad bay ammaan u yihiin in xitaa aysan kaa tagayn ku rakib codsi qaab APK ah maxaa yeelay hubaal, xaaladaha badankood waxay u ogaan doonaan inay yihiin Trojan ama virus.
Marka laga hadlayo antivirus for Android muhiim maahan aniga maadaama ay kaliya ku filnaan doonto in la raaco qawaaniin caqli-gal ah oo gaar ah si looga badbaado khataraha kala duwan ee halista ku ah nidaamka hawlgalka Android. Qaar ka mid ah xeerarka badbaadada ee aan ku soo koobi karno qodobbadan:
Isku day ka soo dejiso barnaamijyada kaliya kaydka rasmiga ah ee barnaamijka Android. Waxaan ula jeedaa Google Play Store.
Xaaladda ku rakibidda codsiyada ka baxsan Suuqa Android, had iyo jeer hubi barta aan soo degsannay iyo in ilaha ammaan yahay.
Ha ku dhex wareegin boggaga internetka ee qaawan maadaama taasi ay tahay halka ugu badan ee khataraha ku soo wajahan boosteejooyinkeenna laga helo.
Had iyo jeer fiiri rukhsadaha ay codsiyada na weydiiyaan in aan ku rakibeyno Android-keena, xitaa kuwa aan kala soo baxno ama ka soo rareyno dukaamada rasmiga ah sida Play Store ama Amazon Apps.
Ku xir shabakadaha Wi-Fi ee aad ku kalsoon tahay.
Ha ku xidhin barnaamijkeena Android kombiyuutarada aan la aqoon sida dukaamada wicitaanka, maktabadaha dadweynaha, iwm.
Dib-u-hagaajinta USB-ga ayaa naafo ah oo kaliya dhaqaajiso markaan runtii u baahanahay.
Haysato rukhsad si aad u rakibto barnaamijyada laga helo ilo aan lagaranayn naafo. Waxaan kicin doonaa kaliya markaan runti u baahanahay.
Sida aad aragto, dhammaan xeerarka ama xeerarka aan halkaan ku sharaxay waa xeerarka dareenka guud ee ugu nadiifsanSida aadan uga tagi doonin furaha gurigaaga qof shisheeye ah ama aadan uga tagi doonin meel kasta, sharciyada sida badbaadada leh u adeegsanaya Android-kaagu waa kuwo fudud sida kuwa lagu maamulo nolol maalmeedkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Amniga » Codsiyada lagu hagaajinayo Android runtii ma loo baahan yahay?
Markan si adag ayaan kugu raacsanahay, marka hore, meel dhexaad sare ama mid dhexdhexaad ah oo leh 2 ama kab ka badan Gb wan aad ayey u fududahay in la maareeyo, ma aha sidaas oo ah heer hoose oo wata 512 mb oo wan, nidaamka qalliinka ayaa ka hawl gala in ka badan 300 mb aqbasho, waad ku mashquulsan tahay haa ama haa xasuus-sameeye, waxaan haystay g510 Huawei ah illaa aan ka rakibayo Abuurka ayuu taleefanka bilaabay inuu noqdo mid la isticmaali karo
Jawaab Juan Carlos Melgarejo
Waa run waxaad dhahdo JC Melgarejo, hadaad heysato tiro yar oo ah 512 mb oo wan, waxaad ubaahantahay inaad xasuusta maareyso iyo inkale, iyo antivirus-ka, sidee tahay, waxaa jira noocyo caan ah oo PC ah in ay leeyihiin noocyo wanaagsan oo loogu talagalay android, qaar ka fudud kuwa kale, laakiin iyagu waa lagama maarmaan, waxba ma yeelaan, caqliga fiicana sidoo kale waa ansax, dabcan
Aniga waxay ila tahay in antivirus oo dhami aysan sidaa ahayn, xasuusiyayaashuna waxay shaqeeyaan, tusaale ahaan waxaan haystaa mootada g Waxaan isticmaalaa sayidka nadiifka ah, mar hadaan dhacay anigoo ciyaar ka soo rarayo playstore-ka wuu burburay waana la joojiyay, iyo Waxaan qaadanayay meel aanan tirtiri karin ama aan isticmaali karin, maadaama haddii aan markale soo dejiyo ay bilawday inay qabsato meel badan, ma aqoonsanayn wixii horeyba loogala soo degay, halkaas ayay ahayd markii aan isticmaalay sayid nadiif ah iyo daaweyn muqadas ah. Iyo sida fayraska fayraska ah, haddii ay shaqeyso maxaa yeelay waxay ogaataa barnaamijyada ugu "halista badan" (maxaa yeelay waxay awood u leedahay inay si weyn wax uga beddesho android-ka) iyo faylasha fayraska ku jira ee la keydin karo, waxayna i siineysaa fursad aan ku tirtiro ama uga tago. Ex: Waxaan ku ogaadaa jajabka udub dhexaadka leh amniga cm
Jawaab Nahuel Gomez Castro
Runtii kuma raacsani qodobka. Taleefankeygu waa Samsung Galaxy s3 bilaash ah oo leh ROM ROM leh 1Gb RAM iyo android 4.3, waxaanan arkaa app nadiifin wanaagsan xaaladaha qaarkood, sida tayda. Waxaa jira ciyaaro culus, eeg Racing Real 3, oo leh wareeg gaar ah (Circuit 24 heures - Le Mans) oo jiidaya RAM badan, dhab ahaantii, waa inaan ku sii daayaa dhammaan macluumaadka barnaamijka dibedda (dhammaantood hal sanduuq 29) 1). ram waa macquul, oo waxaan kaliya oo socon karaa wareeggaas haddii aan haysto ugu yaraan 500MB oo RAM ah oo bilaash ah. Maaddaama "si rasmi ah" aysan u jirin wax cusbooneysiin ah terminalkan, ma garan karo haddii nooc kale oo android ah sida kitkat maamulaha xusuusta RAM uu ka fiicnaan doono, anigu garan maayo. Haddii aanan haysan barnaamijkaas dibadda ah, waan kari karayay Ha ciyaarin jinsiyadaha qaarkood, tusaale ahaan, ciyaarta ama abka, ama waxkastoo, i joojiya oo igu celiya desktop-ka ugu weyn, iyadoo aan suurta gal ahayn in la diro warbixin, taas oo mararka qaar sameyn karta. Iyo sidaan oo kale, waan ogahay kiisas badan oo aan kugula taliyay inaad dhigto barnaamijkan, gaar ahaan si aad uhesho RAM.
Ku jawaab jimg
Aad baan kugula raacsanahay jimg, waxaan haystaa 1 gb wan oo wan ah oo taleefanka ah ka dib dhowr saacadood oo la istcimaalo, halkaasoo aan durba ka furay codsiyo badan, taleefanku wuxuu bilaabmayaa inuu "yara" yaraysto, waxaan u gudbinayaa isaga iyo Voila maraakiibta nadiifta ah !!, Taleefoonku waa sida dheecaanka oo kale ayuu u jawaabayaa had iyo jeer ... ... Anigu ma iibsado "fiicnaanta xusuusta wanaagsan ee android", haddii ay fiicnaan lahayd waxyaalahan ma dhaceen ....
NINKA SAACADDA dijo
Dadyohow fudud: xidid, cagaar, sayid nadiif ah iyo voila. Telefoonku wuxuu u eg yahay xariir
Jawaab NINKA SAACADDA
Aragtidaada waa mid aad loo ixtiraamo.
01 • laakiin sidaad u ogaan laheyd, waxaan u isticmaalnaa spindles apk-saddexaad ah sababo aan la jaan qaadi karin tabka ama fone-ka aan ka heysanay noocyadii hore ama sababta oo ah ma jiraan wax ka badan google estore. Markaa naftaada ha usheegin in antivirus uusan muhiim aheyn .waxaa kafiican taxadarka in la baroorto
02 • In kastoo ay run tahay in nidaamka android uu awood u leeyahay maaraynta xusuusta wananka iyo inuu si toos ah u xiro codsiyada. Waxtar uma lahan hawshan sida loo xayeysiiyay sidaa darteed haddii ay u baahan tahay in gacanta lagu qabto. Si aan loo xirin codsiyada markaa dib loo furayo, waa inaad calaamadeysaa si aysan u xirmin
Ku jawaab fredy valeriano
Dhamaantiin waad salaaman tihiin, waxaan dib u eegi jiray qoraalo aan tiro lahayn si aan ufiiriyo HTC one x pucha markasta oo aan furo chrome wuu barafoobi lahaa sidaasayna ahaatay mudo dheer waxaan arkayay faallooyin si aan u xaliyo dhibaatadayda waxaan ku raacsanahay in yididiilayaashu ay yihiin lama huraan laakiin waxay kuxirantahay xasuusta RAM ee aad isticmaashay x sano sayidkii nadiifka ahaa wuu xirmay barnaamijyadana dib ayaa loo furay .. Ma aqaano hadii ay fikrad fiican tahay .. Wax walba waan isku dayay ilaa qolkaygu ka soo noqday sidii uu uga yimid frabica iyo Waxba .. iyo inbadan iyo inbadan waxaan isku dayay arjiga setCPU Root ... Daaweynta Quduuska ah hada qolkeygu si xawli ah ayuu u socdaa shaashaduna ma fariisato markaan wareegayo ama wax aad u wanaagsan oo aad u baahan tahay inaad sameyso oo dhan. xidid noqo ... Laakiin waxaad si cad u arki kartaa farqiga mana loo baahna in la isticmaalo xitaa Master nadiif ah ... Barnaamijkani maahan hawl dilaa laftiisa laftiisa ... Waxa ay qabato waxay wanaajineysaa xawaaraha processor-ka gacanta, adigu kaliya isku hagaaji qaar ka mid ah xuduudaha iyo voila waxaa jira casharro badan ... Waxaan kugula talinayaa gaar ahaan haddii aad leedahay unug hooseeya ... my HTC my si fiican ayey ii shaqaysay…
Ku jawaab cristian avila
Sidee muhiim ugu yihiin barnaamijyadan taleefannada gacanta casriga ah, tan iyo markii aan soo dejiyey Psafe waxaan ilaaway waxyaabo badan oo welwel hore iga qabay.
Codsiyadaani dhammaantood waa wax aan fiicnayn, waxa kaliya ee ay qabtaan ayaa ah inay cunaan kheyraadka oo ay ku xirmaan internetka, taas oo ah, inay taleefankaaga uga dhigayaan mid gaabis ah marka loo eego is-khilaaf, sax? Intaas waxaa sii dheer inay u shaqeeyaan sidii basaasnimo
Waxaan isku dayay sayidka nadiifka ah, UI-ga UI iwm, waxa kaliya ee aan helay ayaa ah in taleefanka gacantu uu aad u kululaayay 60% sidaa darteed filimka shaashadda uu sameeyay buufinno, kama uusan dillaacin unugga fart. Waxa aan ogahay ayaa ah in Avast uu wax badan ku xaliyay arinta rarka laakiin wali wuxuu aad uga shakiyay antivirus, waa basaasiin aad u badan.
Ku jawaab Lupot
Ami wuu qaboojin lahaa mararka qaarna xawaaraha ayuu wanaajin jiray ilaa taleefankayga gacanta ama barnaamij kasta oo imika shaqeeya aanu mar dambe rakibin wax kasta oo Mobo-kaygu sifiican uga shaqeeyo iyadoon khiyaamo ama khiyaano lahayn
Waa hagaag, kuwa aan ku soo arkay halkaas, midka aan aadka u jeclaa oo sida ugu fiican iigu shaqeeyay si aan u hagaajiyo booska mobilka waa tan aan ku tusi doono, waxaan rajeynayaa inay wax ka tari doonto